सीमा क्षेत्रका नागरिक रातभर जाग्राम
२०७७ बैशाख ६ शनिबार, कपिलवस्तु। कपिलवस्तुका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन। नेपाल भारत सिमाना नजीकै रहेका आधा दर्जन गाउँका बासिन्दा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि रातभर अनिदो बस्ने गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत सरकारले सीमानाका पूर्ण रुपले बन्द गरे पनि सर्वसाधारण राति लुकेर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेकाले सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाले तिनमाथि निगरानी राखेका हुन्। ... बाँकी अंश»
फ्रान्सको फुटबल टोलीलाई दिइयो देशकै सर्वोच्च सम्मान, युवाले पसलबाट चोरेर खाए रक्सी
२०७५ श्रावण २ बुधबार, पेरिस । रुसको मस्कोमा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता फ्रान्सका फुटबल टोलीलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान ‘लिजन दि अनर’ प्रदान गरिएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति एम्यानुएल माक्रोँको कार्यालयले फुटबल टोलीलाई सो सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
झुम्यो फ्रान्स, विश्वकप च्याम्पियनको भब्य स्वागत
२०७५ श्रावण १ मंगलबार, काठमाडौं । रुसमा सम्पन्न २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबल च्याम्पियन फ्रान्सको टोली घर फर्केको छ । टोलीलाई राजधानी पेरिसमा भब्य स्वागत गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ श्रावण १ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलका युवा फुटबलरको उपाधि जित्न सफल फ्रेन्च स्टार किलियन एम्बाप्पेले विश्वकपबाट आएको सबै कमाई एउटा च्यारिटी संस्थालाई दिने निर्णय गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३२ सोमबार, मस्को । रुसको मस्कोमा भएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता फ्रान्सको फूटबल टोलीलाई स्वदेशमा भव्य स्वागतको तयारी भएको छ । फूटबल प्रेमी, सरकार र प्रायः सबै सर्वसाधारणले मस्कोबाट विश्वकर्फ जितेर फर्किन लागेका फूटबल खेलाडीको भव्य स्वागतको तयारी भइरहेको सञ्चार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौँ । एक्काइसौँ संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आइतबार राति सम्पन्न भएको छ । फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्यो । फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप २०१८ : कुन टोलीले पाए कति पैसा
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । आइतबारबाट रुस विश्वकप २०१८ सकिएको छ । एक महिनासम्म चलेको यो प्रतियोगितामा ३२ टोलीहरु सहभागी भएका थिए, जसमा फ्रान्सले प्रतियोगिताको उपाधि हासिल गरेको छ । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप फुटबलमा कसले के के जिते, कति रकम पाए ?
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलको उपाधि फ्रान्सले जितेको छ । फ्रान्सले सुनको ट्रफीमात्र जितेन उसले तीन करोड असी लाख अमेरिकी डलरसमेत जितेको छ । ... बाँकी अंश»
लुका मोड्रिचलाई गोल्डेन बल
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । क्रोएसियाका फुटबल कप्तान लुका मोड्रिचले रुस विश्वकपमा गोल्डेन बल अवार्ड जितेका छन् । उनी रुस विश्वकपका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
फ्रान्सका म्यानेजर डेस्च्याम्पसले राखे कीर्तिमान
२०७५ असार ३२ सोमबार, काठमाडौं । फ्रान्सको विश्वकप विजेता टिमका म्यानेजर डिडियर डेस्च्याम्पसले कीर्तिमान राखेका छन् । उनले खेलाडी र प्रशिक्षकका रुपमा विश्वकप जिताउने कीर्तिमान रचेका हुन् । ... बाँकी अंश»
कम्युनिष्ट मन्त्रीको विश्वकप मोहः फाइभस्टार होटलमा फाइनल हेर्ने भेटिए आधा दर्जन मन्त्री
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं। फुटवलले कस्लाई मोहनी नलगाएको होला त्यसमाथि पनि विश्वकपको फाइनलले। नेपाल विश्वकप फुटवल खेल्न नपुगेपनि यहाँका हरकोहि फुटवलका क्रेजी छन्। फुटवलको क्रेजले नेताहरु पनि अछुतो रहने कुरै भएन। नेताहरु लोकतन्त्रवादी हुनकी कम्युनिष्ट फुटवलको नसा सबैमा लागेकै पाइएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं। रसियाम जारि विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फ्रान्सले क्रोएसियालाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ। फ्रान्सको यो दोस्रो विश्वकप उपाधि हो। ... बाँकी अंश»
विश्वकप इतिहासको तेस्रो कान्छो खेलाडी जसले खेल्दैछ फाइनल
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको फाइनल काउन्ट डाउन सुरु हुँदै गर्दा फ्रान्सका खेलाडी काइलिन एम्बाप्पे त्यस्ता युवा खेलाडी हुन् जो विश्पकप फुटबलको इतिहासकै तेस्रो कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान रचेका छन् । ... बाँकी अंश»
फ्रान्स र क्रोएसियाका पाँच-पाँच खेलाडी जसले फाइनलमा ल्याए
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको उपाधि भिडन्त हुँदै गर्दा फ्रान्सले एउटा कीर्तिमान रचिसकेको छ । सन् १९९८ देखि अहिलेसम्मको पाँच विश्वकपमा फ्रान्स यो भाग्यमानी सावित भएको हो । ... बाँकी अंश»
क्रेजी चार फुटबल क्रोएसियन फ्यानको विश्वकप हेर्ने एक असफल प्रयास
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । फुटबलको ज्वरो यस्तो एडिक्सन हो मानौं कि त्यो भएन भने संसारै शून्य जस्तो लाग्छ । यस्ता क्रेजी फ्यान विश्वमा धेरै छन् । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबल : फाइनलमा फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दै
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौँ । रुसमा जारी विश्वकप फुबटल– २०१८ को उपाधिका लागि अहिले केहीबेरमा फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्दैछन् । रुसको सेन्ट मस्कोस्थित लुजनिकी रङ्गशालामा आज राति ८:४५ बजे दुवै टोली विजय लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रनेछन् । ... बाँकी अंश»
रेल स्टेसनमा छनोटको अभ्यास गर्ने क्रोएसिया कसरी पुग्यो विश्वकप फाइनलमा ?
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । आइतबार रुस विश्वकप २०१८ को अन्तिम खेल अर्थात् फाइनल खेल हुँदैछ । यो खेलले २१ औं संस्करणको विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ । फुटबलको सबैभन्दा ठुलो उपाधिका लागि फ्रान्स र क्रोएसियाको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ... बाँकी अंश»
‘टिभी च्यानलले खेलमा भन्दा धेरै राम्री युवतीमा फोकस गरे’
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघ फिफाका अधिकारीहरुले विश्वकपको खेल भइरहेको अवस्थामा टिभी च्यानलहरुले ल्यामर्समा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन् । ... बाँकी अंश»
इतिहास दोहोर्‍याउन आतुर फ्रान्स
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । पत्येक टोलीले आफ्नै एउटा इतिहास हुन्छ । साथै प्रत्येक पुस्ताका खेलाडीहरुका लागि खुसी मनाउनका लागि आफ्नै सफलता महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तोमा फ्रान्स पनि अछुतो छैन । ... बाँकी अंश»
यसकारण हार्यो इंगल्याण्ड बेल्जियमसंग
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा बेल्जियम विजयी भयो । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेडियममा भएको तेस्रो स्थानको भिडन्तमा शनिबार राति इंगल्याण्ड २–० ले पराजित भयो । ... बाँकी अंश»